Wararka bangiga dhexe | Rootiyooyinka iyo calaamadaha ciribtirka
Home » Baanka dhexe ee wararka
BOC si lama filaan ah ayey u soo rogtay horumar badan bishii Diseembar
BOC wuxuu ka tegey heerka siyaasaddu isma beddelin 1.75% bishii Diseembar. Bayaanka la socda ayaa isu beddelay hawd badan marka loo eego bishii 10aad. In kasta oo ay socdaan hubanti dagaal ganacsi oo socda, siyaasad dejiyaashuhu wali way ku kalsoon yihiin koboca dhaqaalaha gudaha. Waxay kaloo qireen in dhaqaalaha adduunka uu xasiliyay ...
BOC waa inay istaagtaa dhanka Jidadka bisha Diseembar, halka la Ogyahay Sicirka Suurtagal ee Suurtogal ah
In kasta oo dovish la yaab leh bishii Oktoobar, waxaan rajeyneynaa BOC inay ka tagto heerka siyaasaddu aan is beddelin 1.75% toddobaadkan. Xogta dhaqaalaha ee lasii daayay mudadii lagu jiray kulanka kulanka ayaa adkayd, taasoo u saamaxday bangiga dhexe inuu waqti badan qaato si uu ula socdo xaalada ...
Qiimaha Lacagta Caddaanka ah ee BBA lama beddelo laakiin waxaa loo ogolyahay inay sii fududaato
Sidii si ballaadhan loo filaayay, RBA waxay uga tagtay sicirka lacagta oo aan is beddelin 0.75% bishii Diseembar. Bangiga dhexe wuxuu si taxaddar leh rajo wanaagsan uga qabtay horumarinta dhaqaalaha gudaha. Intii aan aragnay qodobbada loo weeciyay dhaqaalaha guud ahaan iyo suuqa guryaha gaar ahaan, xubnaha ...
Daqiiqadaha FOMC ayaa shaaca ka qaaday in Xubnaha badankood ay u arkeen Heerka Sicirbararka ee hadda sida ku habboon
Daqiiqadaha FOMC ee kulanka Oktoobar ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha badankood ay xukumeen in fududeynta lacageed ay ku filan tahay taageerida kobaca. Si kastaba ha noqotee, waxay sii wadeen inay hoos u arkaan aragtida dhaqaalaha. Bishii Oktoobar, xubnahu waxay u codeeyeen in la gooyo Fed ...
Daqiiqadaha RBA: Xubnaha Loogu Maleeyay Inay Joogeen Bishan. Warbixinta Shaqo-la’aanta ayaa kalliftay Dacwadda ah in si Dheeri ah loo Adeegsado
Daqiiqadihii RBA ee kulanka November waxay soo direen dhawaaq ka sii badan intii la filayay. Qoraalka Siyaasadda Lacagta, xubnahu waxay xuseen inay “Guddigu ka warqabaan in sicirku mar horeba aad u yaraa isla markaana wax kasta oo la dhimayo ay soo dhoweynayaan ...
RBNZ Unanimously bidix OCR ee 1%. Qiimee lambarrada ku xiga weli wali macquul
RBNZ wuxuu ka tagay OCR oo aan isbeddelin 1% bishii Oktoobar. Xubnaha ayaa qiray in sicir bararku uu ka hooseeyay bartanka bartilmaameedka 2% iyo saadaasha sicir bararka ay hoos u dhacday. Si kastaba ha noqotee, waxay aaminsan yihiin fududeynta lacageed ee hore inay kor u qaadi doonto heerka qiimaha ...
RBNZ Falanqeynta - Suuqa Kala Qaybinta Sicir-dhimis Kale Tallaabada Toddobaadkan
Suuqa ayaa weli loo qeybsan yahay haddii RBNZ ay hoos u dhigi doonto OCR toddobaadkan. Dabayaaqadii bishii Agoosto, suuqa wuxuu si buuxda ugu qiimeeyay qiimo jaban -25 bps. Haddana, bangiga dhexe wuxuu la yaabay a -50 bps dhimis, isagoo diraya ...
Qiyaasta Siyaasadda Bidix ee 0.75%. Laba xubnood ayaa u codeeyay in la cuno
In kasta oo heerka Baanku isbeddelay 0.75% sidii la filayay, waxaa la yaab leh in la arko laba xubnood oo u codeeyay dhimista sicirka. Daqiiqadihii, BOE wuxuu albaabka u furay albaab qiimo dhimis ah markii ugu horeysay. Ingiriiska ...
Sicirka Bidixda Lacagta Badela ee aan Is Bedeleynin ee ah '0.75%', Ayaa Lagu Joojiyay Dovish Bias iyada oo Xubnaha ay isku halleyn doonaan si ay u keenaan Sicirka Shaqada ee Hoose.
Sidii la filaayay, RBA waxay ka tagtay sicirka lacagta oo aan is badalin 0.75%. Tacaddi xumada ayaa weli sii socota iyadoo dadka siyaasad dejiyayaasha ah ay halgan ugu jireen inay hoos u dhigaan heerka shaqo la’aanta isla markaana ay kor u qaadaan sicir bararka Kobcinta dhaqaalaha ayaa muujisay “wax yar ayaa is badalay”. Xubnuhu waxay xaqiijiyeen in “isbedel qunyar rogan uu u muuqdo ...
BOE Falanqaynta - Joogtaynta Dovish Mawqifka inkasta oo Aan Wax Bixin-Brexit Ka Yar
Fursadda aan heshiis-la’aanta Brexit waxay umuuqataa inay yaraatay ka dib markii Qodobka 50 loo sii dheereeyay illaa Janaayo 2020 baarlamaankana wuxuu qabanayaa doorasho qunyar socod ah bisha Diseembar. Si kastaba ha noqotee, kobaca gudaha ayaa muujiyay astaamaha dhexdhexaadinta iyo heerka shaqo la'aanta ayaa hoos u dhacday ...
Bedelay Dovish, BOC waxay ka hadashay wax ku saabsan Sicir-dhimista Ceymiska Markii ugu horreysay Bisha Oktoobar
BOC waxay u rogtay dovish shirkii Oktoobar, iyada oo la ilaalinayo heerka siyaasaddu aan laga beddelin 1.75%. Markii ugu horreysay, bangiga dhexe wuxuu ka hadlay qiimaha dhimista "caymiska", isagoo daliishanaya khasaaraha dagaalka ganacsiga ee ku yimid maalgashiga ganacsiga iyo dhoofinta. Baaqa ayaa diray ...
Calaamado Fasax ah oo Joojinaya ka dib Sicir-goynta Seddexaad
FOMC waxay soo saartay jawi jajab ah shirkii October. Baanka dhexe wuxuu hoos u dhigay heerka lacagta Fed, by -25 bps, ilaa 1.5-1.75%. Si kastaba ha noqotee, Fed-ka ayaa ka saaray luuqaddii ay ku dhaqmi lahayd sii wadidda ballaarinta dardaaranka hore. Tani ...